u-Petersen ubizwe okokuqala kuma-Proteas
Oshaya kuma-VKB Knights, u-Keegan Petersen uzothatha indawo ka-Aiden Markram owalimala ngaphambi komdlalo we-Test bedlala ne-England eKapa.
Ngemizamo ye-CSA yokunika imiklomelo ngokudlala kahle, u-Petersen ubizwe kuma-Standard Bank Proteas emuva kokudlala kahle isikhathi eside kwi-CSA Domestic Franchise Four-Day series. Wanezezela i-season yakhe enhle ngama-runs awu-111 (240 balls, 12 fours) edlalela iqembu le-South Africa A bedlala ne-England kumdlalo wobungani kuhambo ngaphambi kwe-Test series.
Lomdlali oneminyaka ewu-26 wase-Paarl wadlala imidlalo ewu-88 ye-First Class kanye nama-runs awu-5 490, umphumela omkhulu wama-runs awu-225 engaphumile ne-average ewu-40.66.
u-Markram uzohlinzwa kuqala lelisonto emuva kokulimala umunwe wesine esandleni sokunxele osukwini lesibili lomdlalo odlalwa manje e-Centurion.
u-Boucher ugculisekile ngenqubekelo phambili yama-Proteas u-Hamza uletha ukukhanya ekushayeni kwama-Proteas i-India inqobe i-series ngokunqoba nge-innings u-Linde uzothatha indawo ka-Maharaj kumdlalo we-Test wokugcina i-CSA ihalalisele u-Maharaj ngokuthola izinti eziwu-100 kuma-Test u-Sharma uhlela isimo ngamakhulu alandelanayo u-Sharma uhlela isimo ngamakhulu alandelanayo u-Elgar no-De Kock bashaye amakhulu okuqala kuma-Test e-India osukwini ama-Proteas engaphezulu i-India ingaphezulu ngosuku lokuqala le-Test series "Angeke sigxile kwisimo" - u-Markram u-Beuran Hendricks ubeke ama-Proteas endleleni yokunqoba